Adeeg hal joogsi ah oo loogu talagalay shaabadaynta biraha
Qaybaha shaabaddu waa qaybo biraha ka samaysan, oo ah, qaybo lagu baaraandegi karo shaabadaynta, foorarsiga, fidinta iyo habab kale. Qeexitaan guud waa - qaybo leh dhumuc joogto ah oo ku jira habka socodsiinta. Qaybaha u dhigma ayaa ah qaybo tuuraya, qaybo been abuur ah, qaybo mashiinno, iwm tusaale ahaan, qolofka birta ah ee ka baxsan baabuurka waa biraha biraha ah, iyo qaar ka mid ah weelasha jikada ee ka samaysan birta biraha ah iyagana waa biro. Stamping waa nooc ka mid ah farsamada dayactirka baabuurta, taas oo ah in la dayactiro t ...
Is -habeynta biraha OEM ODM
Shuruudaha guud ee muuqaalka qeybaha shaabadaynta saxda ah ee birta Badeecadaha aan hadda isticmaalno waa la tijaabiyey. Kaliya alaab tayo leh ayaa laga keeni karaa bakhaarka, iyo alaabta lagu farsameeyo qaybaha shaabadaynta biraha waa isku mid. Haddaba waa maxay nooca qaybaha bir -shaabadaynta lagu tirin karo inay yihiin kuwo aqoon leh? Haddii qeybaha shaabadaynta saxda ah ee birta la tirtiro isla marka la isticmaalo, ma badeecada noocaas ah ayaa u qalantay? Xiaobian -ka soo socda ayaa kuu sharxi doona sida farsamaynta farsamaynta bir -birta ...
Adeeg alaab shaabadaynta saxda ah
1. Geedi socodka qaybaha shaabadaynta saxda ah ee birta, dhimashadu waxay xaqiijineysaa cabbirka iyo saxsanaanta qaabka qaybaha bir -shaabadaynta birta, guud ahaan ma dhaawacdo tayada dusha sare ee qaybaha shaabadaynta, iyo nolosha adeegga dhimashadu guud ahaan waa dheer tahay, sidaa darteed tayada shaabadaynta birtu waa mid deggan 2. Qaybaha shaabadeynta saxda ah ee qalabka ayaa ka shaqaysiin kara qaybo leh baaxad weyn iyo qaab isku qasan, sida saacadda saacadaha saacadaha iyo saacadaha, dogobka baabuurka ee dheer iyo qaybaha daboola. Waxaa weheliya qabowga ...
Noocyada cilladda muuqaalka caadiga ah ee qaybaha shaabadaynta birta: Dillaac: maaddada birta ayaa jaban inta lagu dhufanayo Xoqidda: jeex-jeex-gacmeed-gacmeed leh oo ka samaysan dusha sare ee qalabka Ka-xoqidda: waxyeellada ka dhalata taabashada iyo is-maandhaafka ka dhexeeya sagxadaha Oxidation-ka hawada Deformation: kala duwanaanshaha muuqaalka oo ay keentay maaddadu markii lagu shaabadeynayey ama la wareejinayey Burr: walxaha dheeraadka ah gebi ahaanba lagama tagin inta la feerayo ama la jarayo geeska Convex Dent: aan caadi ahayn ...
Adeeg hal joogsi u ah alaabta guga
Spring 1. Gu'ga Torsion waa guga oo xambaarsan qallooca torsion -ka, qaybtiisa shaqadana sidoo kale si adag ayaa loogu dhaawacay qaab muquunis ah. Dhismaha dhammaadka gu'ga torsion waa gacan torsion oo loo farsameeyay qaabab kala duwan, ma aha giraan jillaab. Guga torsion -ku wuxuu adeegsadaa mabda'a leverka si uu ugu maroojiyo ama ugu wareejiyo walxaha laastikada leh qalab jilicsan iyo adkayn sare, si uu u yeesho tamar farsamo oo weyn. Spring 2. Guga xiisaddu waa il gariiradda oo xanbaarsan xiisad axial. Marka aan culeys la saarin, gariiradda te ...
OEM ODM dhammaan taxanaha guga
Control 1. Xakamee dhaqdhaqaaqa mashiinnada, sida guga waalka ee mashiinka gubashada gudaha, guga xakamaynta ee xajinta, iwm. iwm. si loo qaabeeyo waa c ...
Adeegga taageeraya alaabta guga
Guga waa qayb farsamo oo adeegsata dabacsanaanta shaqada. Qaybaha ka samaysan walxaha laastikada ah waxay ku curyaamiyaan ficilka xoogga dibadda, waxayna ku noqdaan xaaladdii asalka ahayd ka dib markay ka saareen xooggii dibadda. Sidoo kale loo yaqaan "guga". Guud ahaan ka samaysan bir guga. Noocyada il -biyoodka waa kuwo adag oo kala duwan. Sida laga soo xigtay qaabka, ay inta badan ka mid guga gariiradda, guga duudduuban, guga saxan, guga-qaabeeya gaar ah, iwm Sida qayb muhiim ah in nidaamka warshadaha, spri ...
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Boolal, Dhimashada Magnesium, Aluminium CNC Qaybo Machined, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Sheet Birta Stamping Products, Guga Saxanka, Dhammaan Alaabta